SAWIRO:-Wasiirka Amniga iyo Duqa Muqdisho oo kormeer sameeyay – XAMAR POST
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa dhalinyarada ku nool Caasimadda ku boggaadiyey sida wanaagsan ee ula shaqeeyaan Ciidanka Amniga ka shaqeynaya.
Guddoomiyaha ayaa xalay booqasho ku tagey qaar kamid ah isgoysyada ugu muhiimsan magaalada Muqdisho ayaa soo arkay howlgallo ay wadeen Ciidanka Amniga. Waxuna halkaas kula kulmay dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku caweynayay waddooyinka, kana wareystay xaaladdooda iyo sida uu yahay ammaanka degaanka.
“Dhalinyarada Caasimadda oo aan xalayla sheekeystay waxay igu farxadgeliyeen sida ay u jecelyihiin Madaxdooda iyo sida ay gacanta ugu siinayaan ciidanka amniga”.
Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ayaa ku adkeeyey bulshada ku nool Muqdisho in ay sii xoojiyaan la shaqeynta hay’adaha ammaanka, maadaama ay u shaqeynayaan sidii amniga loo sugi lahaa.
Sidoo kale Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo weheliyaan Wasiirka Amniga ayaa kormeer ku tagey xarunta 991 ee Booliiska, isagoo ku dhiirigeliyey howllaha muhiimka ah ee ay bulshada u hayaan, gaar ahaan howlgalo ay shacabku ku soo wargeliyeen Booliska oo lagu soo qabtay Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
“Xarunta 991 ee Booliiska oo kormeer ku tagnay waxaan ku faraxsanahay warbixino ay shacabka soo gudbiyeen oo lagu howlgalay in lagu soo qabtay nabad-diid farabadan oo shacabka wax yeelo u geysan lahaa. Labo Xubnood oo masaajid Kaxda jiifanayey oo Idaacada Andaluus u shaqeynayey la soo qabtay”.
Duqa Muqdisho ayaa sheegay in Maamulkiisu uu ahmiyad gaar ah siiyey isku xirka shacabka iyo ciidanka, iyadoo uu qeyb weyn ka qaadatay barnaamijka dariseynta oo bulshada isku xiray.
Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya oo maanta Ardayda Shahaadiga ah ka qaadeysa Imtixaan.